Xildhibaan Khadiijo M Diiriye “Baaqashada kulamada baarlamaanka waxaa sabab u ah Xildhibaanada aan wasiirada aheyn” – Kalfadhi
Xildhibaan Khadiijo M Diiriye “Baaqashada kulamada baarlamaanka waxaa sabab u ah Xildhibaanada aan wasiirada aheyn”
Xildhibaan Khdiijo Maxamed Diiriye, oo sidoo kale ah kamid ah xubnaha Golaha Waasiirada ee Xukuumadda Rayasl Wasaare Xasan Cali Kheyrre, ayaa beenisay in kulanka Golaha Shacabka uu u baaqday sabab la xariirta Xildhibaanada Wasiirada ah oo aan soo xaadirin fadhiyada Baarlamaanka.
Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in baaqashada kulamada Baarlamaanka ay sababteeda leeyihiin Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, oo qaar kamid ah dalka ka maqan, halka qaar kalane aysan soo xaadirin kulamadii ugu dambeeyay iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
“Waa been iyo dacaayad, Xildhibaanada Wasiirada ah uma baaqan fadhiyadii ugu dambeeyay ee baarlamaanka, waxaa ka dambeeyay Xildhibaanada kulanka ka maqnaa ee aan wasiirada aheyn” ayey Kalfadhi u sheegtay Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha Xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye oo wareysi siisay Kalfadhi.
Xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa difaacday Raysal Wasaare Xasan Cali Kheyrre, oo ay Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka ku eedeeyeen in uu lahaa sababta baaqashada labadii kulan ee ugu dambeysay, waxay nasiib darro ku tilmaamtay in Xukuumadda lagu eedeeyo arimo ka jira Baarlamaanka dhaxdiisa.
“Waa marin habaabin in la yiraahdo Raysal Wasaare Kheyrre ayaa baajiyay fadhiga baarlamaanka sababtoo ah baarlamaanka ma ahan Xukuumadda” ayey u sheegtay Kalfadhi Khadiijo Maxamed Diiriye.
“Hadii Xildhibanada Golaha Wasiirada ku jira ay 50 yihiin islamarkaana aysan soo xaadirin maxaa ku dhacay 225-ka kale ee Xildhibaan maxay u imaan waayeen wasiirada shaqo ayey aadi karaane” ayey ku jawaabtay su’aal waydiinay Wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye.
“Kooramka Kulanka Baarlamaanka waxa uu ku furmaa boqol iyo dhowr qof markii wasiirada laga reeba Xildhibaanada waa ka badan yihiin 200, aniga waxaa ii muuqata in baarlamaanka aysan xag xagan Kheyrre iyo wasiirada” ayey hadalkeeda raacisay Xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye.
Warbaahinta Kalfadhi ayaa Xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye Weydiisay aragtida ay ka qabto in baarlamaanka ay Warbixin ka dhageestaan Guddiga Dib u Eegista Dastuurka iyo in laga doodo amniga dalka sida ay soo jeediyeen Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka waxayna ku jawaabtay.
“Aniga waan ka maqnaa kulankii doodaan lagu soo bandhigay laakiin ma qabo in baarlamaanka buuq loo geliyo Ajendo 10 Xildhibaan ay badali karaan, balse aragtidayda labaduba waa muhiim, sababtoo ah Shir kasta oo Golaha Wasiirada amniga ayaa No 1, noo ah” ayey hadalkeeda ku soo gaba-gabeysay Xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye oo wareysi siiyay Kalfadhi.